ကျော်စွာမိုး – ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com Covering Burma and Southeast Asia Mon, 11 May 2020 05:03:07 +0000 en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.3.3 တိုက်ပိတ်ခံ တန်ဖိုးကို COVID-19 ကာလအတွင်း ပြန်ပြောင်းသတိရခြင်း https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/05/11/222337.html Mon, 11 May 2020 05:03:07 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=222337
ထောင်ထဲမှာ ကျနော်တို့အကျဉ်သားတွေ “ရွှေခေတ်” လို့ခေါ်ကြတဲ့ အချိန်မျိုး တခါတလေရှိတတ်ပါတယ်။
The post တိုက်ပိတ်ခံ တန်ဖိုးကို COVID-19 ကာလအတွင်း ပြန်ပြောင်းသတိရခြင်း appeared first on ဧရာဝတီ.
ကျနော်က အကျဉ်းသားကောင်းတယောက်ပါ။ ထောင်အာဏာပိုင်တွေက ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို တနေ့ကို ၂၃ နာရီ အလင်းရောင်နည်းပြီး မွန်းကျပ်တဲ့ အခန်းကျဉ်းတွေထဲမှာ ပိတ်ထားပြီး အခွင့်အရေးအားလုံးကို ရုတ်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က အဲ့လိုအခြေအနေအောက်မှာ ပျော်ပျော်နေတတ်ခဲ့တဲ့ ခပ်ရှားရှားသူမျိုးပေါ့။
ကျနော်အကျဉ်းကျခဲ့တဲ့ကာလကတော့ စစ်အစိုးရလက်ထက် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွေတုန်းကပါ။ အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလိုပဲ ကျနော့်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ၇ နှစ် ၈ လနဲ့ ၂၅ ရက် အကျဉ်းချခံခဲ့ရပါတယ်။ ရက်နဲ့ အတိအကျ တွက်ပြီးပြောရရင် ၂၈၂၅ ရက်၊ နာရီနဲ့တွက်ရင် နာရီပေါင်း ၆၇၈၀၀ နာရီပါ။
အခုလို ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါပျံ့နှံ့ကူးစက်နေတဲ့အချိန် ကမာ္ဘတဝှမ်းက လူတွေ အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ခံရတာတွေ၊ ဘယ်မှာမသွားပဲ အိမ်ထဲမှာပဲ ရက်ရှည်နေနေရတာတွေ ကြုံနေရတာက အကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်အချိန်တွေကို တွက်ဖြစ်ဖို့ လှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါ။ ရောဂါကူးစက်တာကို ကာကွယ်ဖို့ ကျနော်တို့တွေ တယောက်နဲ့တယောက် ဘယ်အချိန်ထိ အခုလို သီးခြားစီနေကြရမလဲ၊ ဘယ်အချိန်ထိ ညမထွက်ရအမိန့်တွေ၊ ခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်တာတွေနဲ့ ပိတ်ဆို့မှုတွေက ရှိနေဦးမလဲဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အခု သီတင်းပတ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခံထားရတဲ့ဘဝကို မွန်းကျပ်ပြီး သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့လူ တော်တော်များများရှိလာကြပါတယ်။ ကပ်ရောဂါကာလ အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်တွေကို မလိုက်နာကြလို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူမှုတွေလုပ်နေရတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုပဲကြည့်ပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရော စီးပွားရေးအရ ထိခိုက်မှုတွေကြောင့်ပါ သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဖိအားကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ တချို့ပြည်နယ်တွေမှာ ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ပြန်ရုတ်သိမ်းနေရတာကို ကြည့်ပါ။
လူသားတွေဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ကင်းကွာပြီး မနေနိုင်ကြတာကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘဝမှာ ကျနော်တို့ လုပ်ချင်တာကို မလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်၊ ကျနော်တို့ ပုံမှန်လုပ်နေကျ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေ ပျက်ပြားသွားရတဲ့အချိန်တွေဆိုတာ မလွှဲမသွေကြုံကြရမှာပါ။ အခုကျနော်တို့ကမာ္ဘကြီးက အဲ့ဒီ ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ အခိုက်အတန့်ကို ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။
အကျဉ်းထောင်က ကျနော့်ကို အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မျိုးကို တခါ ရင်ဆိုင်စေခဲ့ဖူးပါတယ်။
ထောင်ထဲမှာ ကျနော်တို့အကျဉ်သားတွေ “ရွှေခေတ်” လို့ခေါ်ကြတဲ့ အချိန်မျိုး တခါတလေရှိတတ်ပါတယ်။ ကန့်သတ်ချက်တွေ အနည်းဆုံးအချိန်ကို ပြောတာပါ။ ရွှေခေတ်က ပျော့ပြောင်းပြီး ဆက်ဆံရအဆင်ပြေတဲ့ ထောင်အာဏာပိုင်တွေရောက်လာရင် ရွှေခေတ်ကို ကြုံရတတ်ပါတယ်။
ရွှေခေတ်မှာဆို ကျနော်တို့ကို တနေ့ ၂၃ နာရီ တိုက်ပိတ်မထားတော့ပါဘူး။ ကျနော်တို့တွေ နာရီနဲ့ချီ (တခါတလေ မနက်ကနေ ညနေလောက်အထိ) ကိုယ့်အကျဉ်းခန်းအပြင်မှာ လမ်းလျှောက်လိုက်၊ ဝင်းထဲက တခြား အကျဉ်းတိုက်ခန်းတွေကို သွားလည်လိုက် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါက ထောင်ထဲမှာတော့ မဟာလွတ်လပ်မှုကြီးပဲဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကလည်း ဒီအခွင့်အရေးမှာ မိမိရရ တခြားအကျဉ်းတိုက်ခန်းတွေ မိတ်ဆွေတွေဆီ သွားလည်၊ စကားပြောရတာကို သဘောကျကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ အဲ့ဒီ လွတ်လပ်မှုတွေကို ခံစားဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလိုမလိုက်ခဲ့ဘူး။ အကျဉ်းခန်းအပြင်ကို ထွက်ခွင့်ရနေတဲ့ အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာပါ ကျနော်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်အကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းက ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားရတဲ့ လွတ်လပ်မှုထက် အကျဉ်းခန်းထဲမှာ သီးခြားတဦးတည်းနေရတာကို ပိုကြိုက်လို့ပါ။
အပေါ်မှာ ကျနော်ပြောခဲ့သလိုပဲ အဲ့ဒီအတွက် အကြောင်းပြချက် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာ စာဖတ်ဖို့ပါ။ စာအုပ်တွေနဲ့ သတင်းမဂ္ဂဇင်းတွေကို ဖတ်ခြင်းကသာ အသိပညာတိုးဖို့၊ ပြင်ပကမာ္ဘနဲ့ အဆက်မပြတ်ဖို့နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဆက်လေ့လာနိုင်ဖို့ ကူညီလိမ့်မယ်ဆိုတာကို သေချာသိနေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ထောင်ကျနေချိန်က ဘယ်စာအုပ် ဒါမှမဟုတ် စာရွက်စာတမ်းကိုမဆို ရေးတာ၊ ဖတ်တာတွေကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ထားတာကြောင့် အခန်းအပြင်မှာ ကျနော် စာဖတ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်က အကျဉ်းခန်းထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိတ်ထားရကို ကြိုက်ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီလိုမှသာ ဘယ်သူမှမသိအောင် ကျနော် တနေကုန် စာဖတ်နိုင်မယ် မဟုတ်လား။
ပြောရရင်တော့ “နှစ်ထပ် ချုပ်နှောင်ခြင်း” အကန့်အသတ်တွေကြားမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထပ်မံကန့်သတ်နေထိုင်ခြင်းပေါ့။ အဲ့ဒီလို နှစ်ထပ်ချုပ်နှောင်မှုနဲ့နေတဲ့အချိန်တွေမှာ ကျနော်က မနက်အိပ်ယာထချိန်ကနေ အိပ်ယာဝင်ချိန်အထိ အချိန်ဇယားတိတိကျကျနဲ့ ဖတ်နိုင်သမျှ အများဆုံးဖတ်၊ လေ့လာနိုင်သမျှ အားကုန်လေ့လာနေခဲ့ပါတယ်။ အကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့ ၇ နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ကျနော်အလုပ်ဖြစ်ဆုံးကတော့ စာကို တစိုက်မတ်မတ် ဖတ်ခြင်းပါပဲ။
ဒါကြောင့်ပဲ ကျနော်ဟာ ထောင်အာဏာပိုင်တွေက ဘယ်လိုပဲ ပိတ်လှောင်ထားထား နေပျော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်အကျင့်ကို မိတ်ဆွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေက စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပြီး အားအင်ချိနဲ့ ဖြူဖျော့လာမှာကို စိုးရိမ်ပြီး အကျဉ်းခန်းကျဉ်းထဲကနေ ဆွဲထုတ်ကြပြီး အပြင်မှာ လေကောင်းလေသန့်ရှူခိုင်း၊ စကားစမြည်ပြောရင်း အညောင်းပြေ ခြေဆန့်လက်ဆန့်လုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်အကျဉ်းချခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်ကတော့ တခုတည်းရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျနော်တို့ကို စိတ်ဓါတ်တွေပြိုလဲအောင်၊ ခံနိုင်ရည်တွေ ကုန်ခမ်းသွားအောင်၊ အသိပညာကင်းမဲ့အောင် မှောင်မိုက်တဲ့ အကျဉ်းခန်းထဲမှာ ပိတ်ထားတဲ့ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ဆန္ဒအတ်ိုင်း မဖြစ်အောင်ပါပဲ။
ကျနော် ခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့တာက ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်းဘဝမှာ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရမယ်၊ ဒါ့အပြင် စိတ်ပိုင်း ရုပ်ပိုင်းရော စိတ်ဓါတ်ကိုပါ ရိုက်ချိုးချင်တဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း ကျနော်ဟာ အကျဉ်းထောင်က လွတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ လွတ်လပ်တဲ့လူသားတဦးဘဝကို ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်ဟာ ကနေဒါနိုင်ငံက ဂျာနယ်လစ် Malcolm Gladwell ရဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထုတ် Outliers စာအုပ်ထဲက နာရီပေါင်းတသောင်း သီအိုရီကို မသိလိုက်ဘာသာ ကျင့်သုံးခဲ့မိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီသီအိုရီကတော့ တခုခုမှာ ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးရှိရုံနဲ့မရဘဲ အနည်းဆုံး နာရီပေါင်း ၁၀၀၀၀ လေ့ကျင့်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျနော့်အတွက်တော့ ကျနော်လိုချင်တဲ့အတိုင်း အကျဉ်းထောင်ထဲကဘဝကို အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် အသိပညာပါ ဗဟုသုတပါ တိုးပြီး ထွက်လာနိုင်ခဲ့တာက အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို အနိုင်ယူလိုက်နိုင်တာပါပဲ။
အခု ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကျနော်တို့တွေ အိမ်မှာပဲ နေနေကြရတယ် အသွားအလာ အကန့်သတ်ခံထားရတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့တွေ ဘာဖြစ်လာမလဲ။
အခုတော့ ကျနော်တို့တွေဟာ အမှောင်ထဲမှာ စမ်းတဝါးဝါး သွားလာနေရသလိုပဲ။ ဒီလမ်းမှာ ကျနော်တို့တွေလဲမကျအောင် အမြင်အာရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲ ကျနော်တို့ရဲ့ အာရုံမှန်းဆမှုတွေက အဓိကကျပါတယ်။ (တကယ်တော့ ဒါက ထောင်ထဲကဘဝကို ကျနော်မြင်တဲ့အမြင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ညအမှောင်ထဲမှာ လမ်းလျှောက်ရခြင်းပေါ့။ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျလုပ်ခွင့်မရတဲ့အတွက် ဘယ်ကိုဦးတည်ပြီး ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရပါဘူး။ သွားနေရင်း ဆိုးရွားတာတွေရှိနိုင်သလို၊ သေခြင်းတရားနဲ့တောင်ကြုံချင်ကြုံရနိုင်ပါတယ်။) အခုလည်း ကျနော်တို့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ၊ ဘယ်လောက်ထိသွားနေရဦးမလဲ မပြောနိုင်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ဒါဟာလည်း ကျနော်တို့အတွက် အသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မနက်ဖြန်ဟာ ဘာတွေဆောင်ယူလာပေးမယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ ဘယ်တုန်းကမှမှ သိမှ မသိခဲ့ကြတာ့။
ကျနော်တို့ အခုလုပ်နိုင်တာကတော့ ဘယ်လောက်ပဲမှောင်နေနေ ဆက်လျှောက်နေဖို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ရဲ့ အာရုံမှန်းဆမှုတွေနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ သန္နိဌာန်တွေနဲ့ပေါ့။ အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလို ညအေမှောင်ဟာ ကုန်လွန်ပြီး နေ့သစ်ကို ရောက်လာမှာပါ။ ဒီညအမှောင်ကို ကောင်းကောင်းကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့့ရင် အခြေအနေတွေ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါ နေ့သစ်ကို မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။
(ကျော်စွာမိုးသည် ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်း တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ Embracing Isolation: Reflections on the Value of Confinement Amid COVID-19 ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
]]> မမြင်ရတဲ့ ရန်သူကို နွမ်းပါးတဲ့ မြန်မာပြည် ရင်ဆိုင်နေရပြီ https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/04/18/220778.html Sat, 18 Apr 2020 07:52:52 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=220778
ကျနော်တို့ ယခုအချိန်အထိတော့ ကံကောင်းနေသေးသည်ဟု ဆိုရမည်။
The post မမြင်ရတဲ့ ရန်သူကို နွမ်းပါးတဲ့ မြန်မာပြည် ရင်ဆိုင်နေရပြီ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> အပ်ကြောင်းထပ်နေသော ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးကို ကျော်လွန်၍ https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/01/28/213947.html Tue, 28 Jan 2020 02:30:55 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=213947
ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မြန်မာပြည်သူများသည် ပိုမိုများပြားသော တရုတ်ခရီးသွားများ၊ တရုတ် စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ၊ တရုတ်ထုတ်ကုန်များနှင့် တရုတ်သံတမန်များကို မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ပိုပိုပြီးမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
The post အပ်ကြောင်းထပ်နေသော ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးကို ကျော်လွန်၍ appeared first on ဧရာဝတီ.
တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်သည့် အချိန်တွင် မကြာခဏသုံးဆွဲလေ့ရှိသည့် ညီရင်းအကိုဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော “ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်” ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် အိမ်နီးချင်း ၂ နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအတွက် မှန်ကုန်သည့်အသုံးအနှုန်း ဟုတ်၊ မဟုတ် ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်ရန် သင့်တော်သောအချိန်ဖြစ်သည်။
တရုတ်-မြန်မာ သံတမန်ဆက်ဆံရေး နှစ် ၇၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တရုတ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသို့မလာခင် တရက်အလိုတွင် မြန်မာ့အလင်းနှင့် The New Light of Myanmar အစိုးရသတင်းစာများတွင် “နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာမြင့်သော ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ချစ်ကြည်ရေးကို ဆက်လက်ပုံဖော်မည့် စာမျက်နှာသစ်များ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တရုတ်သမ္မတရှီသည် ဆောင်းပါးတစောင်ရေးသားသည်။
“မြန်မာစကား၌ ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ်ဆိုသည်မှာ တအူထုံ့ဆင်း ညီအကိုဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်” ဟု တရုတ်သမ္မတက ရေးသားခဲ့သည်။ “နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများသည် ရှေးပဝေသဏီမှစ၍ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ချစ်ကြည်ရေးသမိုင်းကာလရှည်ကြာစွာ တည်ရှိနေပါသည်” ဟုလည်း သူဆက်လက်ရေးသားသည်။
တကယ့်လက်တွေ့ဘဝတွင်မူ ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ပေ။ သို့သော်လည်း တိုင်းပြည်သံခင်းတမန်ခင်း ထုံးစံ မြန်မာနှင့် တရုတ် ခေါင်းဆာင်များသည် ထိုအသုံးအနှုန်းကို သုံးလေ့ရှိသည့်အတိုင်း သုံးသည့်သဘောပင်ဖြစ်သည်။ နှစ်နိုင်ငံကြား ဆက်ဆံရေးကို ရည်ညွှန်းသည့်အခါတိုင်း သံတမန်ရေး အသုံးအနှုန်းတခုထက် မပိုပါ။
အမှန်တွင် မြန်မာနှင့် တရုတ်ပြည်သူများသည် ထိုကဲ့သို့ဆက်ဆံရေး မရှိသည်ကို သိသကဲ့သို့ အစိုးရများကြားတွင်လည်း ရှင်းရှင်လင်းလင်း သိကြသည်။ မည်သူမျှ တအူထုံ့ဆင်းများအဖြစ် မခံစားကြရပေ။ တရုတ်နှင့်မြန်မာသည် ပထဝီအနေအထားအရ နီးကပ်နေသော်လည်း ကိစ္စရပ်အထွေထွေတွင် အရမ်းဝေးကွာခဲ့သည်။
ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဟူသော စကားလုံးသည် ရင်းနှီးနီးစပ်သောဆက်ဆံရေးမျိုးကို ရည်ညွန်းသော်လည်း နှစ်နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူနှစ်ရပ်ကြား ဆက်ဆံရေးတွင် နွေးထွေးနီးစပ်ခြင်းမရှိပါ။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်များက စတင် ဖန်တီး အသုံးပြုခဲ့သော ထိုစကားလုံးသည် အဓိပ္ပါယ်မဲ့သည်ဟု ပြော၍ရပြီး နိုင်ငံတော်ခရီးစဉ်နှင့် တရားဝင်သဝဏ်လွှာများတွင်သာ အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် အနှစ်သာရ ကင်းမဲ့သည့် ဝေါဟာရတလုံးသာဖြစ်သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်၏ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုမှ အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းအထိ၊ ထိုနောက် သူ့ကိုဆက်ခံသည့် စစ်အစိုးရများမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမျိုသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရအထိ ထိုအချုက်ကို ကောင်းကောင်းသိကြသည်။
လွတ်လပ်ရေးရချိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံကို မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်မစွပ်ဖက်စေရန်နှင့် အစိုးရအဆက်ဆက်ပေါ်တွင် သြဇာမလွှမ်းမိုးနိုင်စေသည့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမျိုးကို အမြဲကျင့်သုံးခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ တရုတ်နိုင်ငံသည် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်နှင့်ပြည်တွင်းအခြေစိုက်သော မြန်မာကွန်မြူနစ်များ၊ ကွန်မြူနစ်လိုလားသူအုပ်စုများ၊ လက်ဝဲနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကိုပါ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော်၊ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့၊ မိုင်းလား၏ အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်အပါအဝင် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်တွင် အခြေစိုက်သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအများအပြားက ရှီ၏ ခရီးစဉ်ကို ထောက်ခံသည့်ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်သည်ကိုတွေ့သဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံအချို့အတွက် အထူးအဆန်းဖြစ်ကြမည့်ပုံ ရှိသည်။
ရှီ၏ ခရီးစဉ်မတိုင်မီတပတ်အလို တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာရှရေးရာအထူးသံတမန် ဆွန်ကော့ရှန်သည် နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ ထိုအုပ်စုများ၏ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
၁၉၈၅ ခုနှစ် ပီကင်းတွင် ဦးနေဝင်းနှင့် တိန့်ရှောင်ဖိန်တို့ တွေ့ဆုံစဉ်
တရုတ်နိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအပေါ် သြဇာသက်ရောက်မှုသည် နိုင်ငံရေးဝှက်ဖဲတခုပင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ဦးနေဝင်းခေတ်ကလည်း ထိုဝှက်ဖဲကို ကစားလေ့ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ထောက်ပံ့သော မူဝါဒသည် ဦးနေဝင်းနှင့် သူ၏အစိုးရကို မကျေမနပ်ဖြစ်စေသည်။
တချိန်တည်းတွင် မြန်မာအစိုးရ အဆက်ဆက်သည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကြားနေရေး သို့မဟုတ် ရန်ဘက်အသွင်မဆောင်သည့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို ကျင့်သုံးသည်။ အချို့သော မြန်မာအစိုးရများသည် တရုတ်အစိုးရနှင့် လွန်စွာရင်းနှီးကြသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည်အများအားဖြင့် တရုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု မခံရရန် နေလေ့ရှိသည်။ ဦးနေဝင်းအနေဖြင့်လည်း တရုတ်အစိုးရနှင့် ပုံမှန် ဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းရန် အမြဲကြိုးစားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်မြန်မာစစ်အစိုးရက ယခင်အစိုးရများထက် တရုတ်နိုင်ငံကို ပိုမိုလိုအပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့လိုအပ်ရခြင်းမှာ တရုတ်အစိုးရသည် ၎င်းတို့၏ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဟု ခံစားရခြင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏အကူအညီကို အသည်းအသန်လိုအပ်သောကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအပြီး ဆိုးရွားသည့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုများကြောင့် ၎င်းတို့ကို အနောက်နိုင်ငံများဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းက နိုင်ငံရေးအရသာမက စီးပွားရေးအရပါ ပိတ်ဆို့ပြစ်ဒဏ်ချခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာပြည်သူများကို အထင်ကြီးအောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်သလို မြန်မာပြည်သူများ၏ လိုလားနှစ်သက်အောင်လည်း မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေ။ ၎င်းတို့၏ ကျင့်ဝတ်ပျက်ပြားသော ပုံရိပ်ဆိုးများကိုလည်း မဖယ်ရှားနိုင်ပေ။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၎င်းတို့၏ လောဘတကြီး အမြတ်ထုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ အုံကြွမှုအပြီး ပြည်သူတရပ်လုံးကို ဖိနှိပ်သောစစ်အစိုးရကို ထောက်ပံ့ခဲ့ခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတွင်စီးပွားရေး အဟောင်းများအပြင် နောက်ထပ်အသစ်များကိုပါရယူရန် ကြံစည်နေသည့်လုပ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော် ထိုဆက်ဆံရေးသဘောသဘာဝရှိနေသော်လည်း လက်တွေ့အားဖြင့် နှစ်နိုင်ငံတို့သည် တနိုင်ငံက အခြားတနိုင်ငံကိုလိုအပ်နေသည်။
မြန်မာသမ္မတ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရလာသော ရှီ၏ သမ္မတအဖြစ် ပထမဆုံးခရီးစဉ်သည် တခြားခေါင်းဆောင်များ၏ခရီးစဉ်ထက် ပိုအရေးကြီးသည့်ခရီးစဉ်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားမည်သည့်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များထက်မဆို အရေးကြီးသည်။သူသည် နေပြည်တော်သို့နှစ်ရက်ကြာခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို တွေ့ဆုံသည်။
ကာတွန်းမောင်မောင်ဖောင်တိန်က ရှီကျင့်ဖျင်၏ မြန်မာခရီးစဉ်အပေါ် ရေးဆွဲထားသော ကာတွန်း
ထိုခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်သူများ၏ ယေဘူယျခံစားချက်ကို ဧရာဝတီသတင်းဌာန၏ဝက်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် မောင်မောင်ဖောင်တိန်၏ကာတွန်းတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုကာတွန်းတွင် တရုတ်သမ္မတရှီသည် ဈေးဝယ်လက်တွန်းလှည်းဖြင့် သူ၏ လေယာဉ်ပေါ်မှဆင်းလာသည့် ကာတွန်းဖြစ်သည်။ ထိုအမြင်မှာ မြန်မာပြည်သူအများစုက တရုတ်နိုင်ငံကိုမြင်သောအမြင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် အမြဲတမ်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံရေးတွင် သူတို့၏အကျိုးစီးပွားအတွက်သာ ကြည့်သည်ဟု မြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
သူ၏ဆောင်းပါးအရ နှစ်ရက်တာ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ရှီ၏ဈေးဝယ်စာရင်းထိပ်ဆုံးတွင် (၁) ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန် (၂) တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဇုန် (၃) ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း တို့ရှိနေသည်။
တရုတ်သမ္မတသည် သူ၏ဆောင်းပါးထဲတွင် အခြားစီမံကိန်းများအပြင် ထိုစီမံကိန်း ၃ ခုကို ရပ်ဝန်းနှင့်လမ်းအစီအစဉ် (BRI) ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြန် (CMEC) ၏ မဏ္ဍိုင်သုံးခုဟု အလေးထားရေးသားခဲ့သည်၊
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ သူ၏ဆောင်းပါးထဲတွင် မြစ်ဆုံဆည်အကြောင်း တလုံတပါဒမျှ ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ခြင်း မရှိခြင်းဖြစ်သည်။ လိမ္မာပါးနပ်သည်ဟုပင် ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ခြင်းသည် မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှ တောင်ဖက်စွန်းအထိ တနိုင်ငံလုံးမှ မြန်မာပြည်သူအားလုံးအတွက် လက်မခံနိုင်သည့်စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
ရှီမြန်မာနိုင်ငံသို့မရောက်မီ နှစ်ရက်က ထိုဆိုင်းငံ့ထားသော စီမံကိန်း ကို အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရန် လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း ၄၀ နီးပါးက တရုတ်သမ္မတကို တောင်းဆိုကြသည်။ ထိုစီမံကိန်းသည် မြန်မာပြည်သူများ၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေကြောင်းနှင့် ထိုစီမံကိန်းကို ဆက်ုလုပ်လျှင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပျက်စီးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ထိုတောင်းဆိုချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
ရှီနှင့် မြန်မာခေါင်းဆောင်များသည် ထိုမြစ်ဆုံပြဿနာ ဘယ်လောက်ကြီးသည်ကို ကောင်းစွာသိကြသည်။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာမှာ ထိုစီမံကိန်းကို အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရေးဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်လည်း သူ၏ ဆောင်းပါးတွင် အခြားစီမံကိန်း ၃ ခုကိုသာဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစီမံကိန်း ၃ ခုသည်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရည်မှန်းချက်ကြီးလှသော မြန်မာနိုင်ငံမှ BRI စီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်လျှင် အရေးပါပုံရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို တရုတ်နိုင်ငံက လိုအပ်ရသည့် အခြားအကြောင်းတခုမှာ တရုတ်နိုင်ငံကို အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာအထိ လက်လှမ်းမီစေမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထဝီအရ သေနင်္ဂဗျူဟာကျသော တည်နေရာကြောင့်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံကို ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ပင်လယ်ရေကြောင်းလမ်းများ ရရှိစေသော မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဖက် ကမ်းချေမှ စီမံကိန်းများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကူမင်းသို့ နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းသွားသည့် ပိုက်လိုင်း၏ စမှတ်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ပင်လယ်ကွေ့မှ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို မလက္ကာရေလက်ကြားကို မဖြတ်သန်းဘဲ တင်သွင်းနိုင်သည်။
နေပြည်တော် သမ္မတနေအိမ်တွင် ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ရှီကျင့်ဖျင်တို့ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို စစ်ဆေးစဉ်/MOI
သံတမန်ရေးအရဆိုရပါက မြန်မာခေါင်းဆောင်နှင့် တရုတ်ခေါင်းဆောင်များအကြား သဘောတရားရေးရာအရ မတူညီကွဲပြားနေခြင်းသည် သံရေးတမန်ရေးအတွက်ပြဿနာဟု မဆိုနိုင်ပါ။
သူ၏ဆောင်းပါးတွင် ရှီက “မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးခြင်းမှတဆင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ဆောင်မှုကို တရုတ်နိုင်ငံမှ ထောက်ခံအားပေးပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သည် နယ်စပ်ဒေသ၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို အတူတကွ ထိန်းသိမ်းရပါမည်” ဟု ရေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် လက်ရှိအစိုးရသည်လည်း တရုတ်နိုင်ငံကို လိုအပ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ နယ်စပ်ရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအစိုးရသည် တရုတ်နိုင်ငံကို အပြည့်အ၀ ယုံကြည်မှုမရှိနိုင်ပေ။ အစိုးရ၏တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို ထိုအဖွဲ့များလက်မှတ်မထိုးရန် တရုတ်နိုင်ငံက ပြောဆိုမှုများရှိသည်ဟု ယုံကြည်သူများရှိသည်။ NCA သည် မြန်မာအစိုးရက နှစ်ပေါင်းများစွာ တွန်းအားပေးနေသော ကိစ္စဖြစ်သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံတကာစင်မြင့်၌ ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွင့်အရေးနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအပေါ်ကိုလည်း ထောက်ခံအားပေးပါသည်” ဟု ရှီက ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုသို့နိုင်ငံရေးအရထောက်ပံ့မှုကို NLD အစိုးရအနေဖြင့်လိုအပ်သည်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရလျှင် အနောက်နိုင်ငံများမှ ဖိအားများနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အချိန်မျိုးတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် သူ့ဘက်မှရပ်တည်ပေးရန် တရုတ်နိုင်ငံကို လိုလေ့ရှိသည်။
ထိုကိစ္စတွင် တရုတ်သည် မြန်မာခေါင်းဆောင်များအတွက် “ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်”ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤနေရာတွင် ယခင်စစ်အစိုးရများနှင့် လက်ရှိရွေးကောက်ခံထားရသော NLDအစိုးရ၏ ချဉ်းကပ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ နှစ်နိုင်ငံသံတမန်ဆက်ဆံရေးကိုမူ ထိခိုက်ခံလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဥပမာဆိုရပါက မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကဲ့သို့သော ယခင်စစ်အစိုးရခေတ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသည့် စီးပွားရေး လိုက်လျောမှုမျိုးကို တရုတ်အနေဖြင့်မျှော်လင့်၍ ရလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
လတ်တလောကာလတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အထူးသတိထားနေသည်ဟု လေ့လာသူအများအပြားက မြင်ကြသည်။ ထိုစီမံကိန်းအများစုသည် ယခင်အစိုးရခေတ်က တရုတ်နိုင်ငံအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသော စီးပွားရေးလိုက်လျောမှုများဖြစ်နေသည်။ လက်ရှိအစိုးရသည် ထိုစီမံကိန်းများကို အတည်ပြုရာတွင် နှေးကွေးတုံ့ဆိုင်းနေပြီး ရှီ၏ အစိုးရသည် စိတ်မရှည်နိုင်ဖြစ်နေသည်ဟု သုံးသပ်မှုများရှိသည်။
မည်သည့်မြန်မာအစိုးရမဆို ၎င်း၏အိမ်နီးချင်း အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်သည့် တရုတ်နှင့် အနောက်နိုင်ငံများအကြား နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးအရ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်အောင် လက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ သို့သော် ထိုသို့ဆိုခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်လက်ဝေခံမဟုတ်သလို အနောက်နိုင်ငံများ၏သြဇာခံလည်း ဖြစ်လိုမည်မဟုတ်ပေ။
သို့သော် နိုင်ငံရေးအရနှင့်မူဝါဒအရ လက်ရှိအစိုးရသည် တရုတ်နှင့်မနီးစပ်လိုပဲ ဒီမိုကရေစီအပါအဝင်အနောက်တိုင်းတန်ဖိုးများကို မျှဝေရယူလိုကြသည်။ မြန်မာပြည်သူများသည်လည်း ထိုနည်း၎င်းပင်ဖြစ်သည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မတည်ငြိမ်သေးသည့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရသည် ယခင်အတိုင်း လက်တွေ့ကျကျ ဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားလိမ့်မည်။ ထိုမူဝါဒသည် မြန်မာနှင့် အခြားအရှေ့တောင်အာရှ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအချို့နှင့် ကွဲပြားသော အချက်ဖြစ်သည်။
“ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်” ဆက်ဆံရေးသည် နိုင်ငံရေးဝေါဟာရတခုသာဖြစ်သော်လည်း တရုတ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့သည် တနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံလိုအပ်နေသည်တော့ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
( Kyaw Zwa Moe ၏ Beyond the Cliché of ‘Pauk-Phaw’, China and Myanmar Need Each Other ကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
အမေရိကန် – တရုတ် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲမှ အနိုင်ရသူများနှင့် အရှုံးသမားများ
]]> မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ဖို့ နှစ် ၆၀ နိုင်ငံရေး စက်ဝန်းကို ချိုးဖျက်ဖို့ လိုသည် https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2019/10/29/207125.html Tue, 29 Oct 2019 03:09:32 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=207125
ကျနော့် အမြင်အရဆို ပြည်သူတွေအဖို့ မြန်မာ့ သမိုင်း ဟာ ရိုလာကိုစတာ စီးနေရသလိုဘဲ။ ပျော်စရာ၊ စိတ်လှုပ်ရှား စရာတွေ ရှိသလို အလန့်တကြား စိုးရိမ် စရာတွေလည်း ရှိတာကိုး။
The post မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ဖို့ နှစ် ၆၀ နိုင်ငံရေး စက်ဝန်းကို ချိုးဖျက်ဖို့ လိုသည် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ဒီမိုကရေစီနဲ့ မေးခွန်းတခု (သို့မဟုတ်) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်နေလား https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2019/10/23/206692.html Wed, 23 Oct 2019 07:16:05 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=206692
“အောင်ဆန်းစုကြည် အနိုင်ရနေလို့လား”လို့ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားအသိတယောက်က မကြာခင်က ဧည့်ခံပွဲတခုမှာ ကျနော့်ကိုမေးပါတယ်။
The post ဒီမိုကရေစီနဲ့ မေးခွန်းတခု (သို့မဟုတ်) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်နေလား appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ ဆို https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2019/10/10/205938.html Thu, 10 Oct 2019 02:30:16 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=205938
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် သမ္မတ ဖြစ်ရေး မဖြစ်ရေးက အနည်းဆုံးတော့ “အကယ်၍” ဆိုတဲ့ အပေါ် မူတည်နေပါတယ်။
The post ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ ဆို appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> မင်းတို့စံပျော် နေပြည်တော်က အတိတ်နိမိတ်များ https://burma.irrawaddy.com/article/2019/09/28/205135.html Sat, 28 Sep 2019 01:30:59 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=205135
နေပြည်တော်ဆိုတာ "မင်းတို့ပျော်စံရာ နန်းစိုက်ရာ နေရာ"လို့ အဓိပ္ပါယ်ပေမယ့် ကျနော် ရောက်ခဲ့တဲ့ နေပြည်တော်ကိုတော့ "ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ စိုးစံရာနေရာ"လို့လည်း ခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်။
The post မင်းတို့စံပျော် နေပြည်တော်က အတိတ်နိမိတ်များ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းအား တမ်းတချက် https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2019/09/16/203970.html Mon, 16 Sep 2019 03:28:40 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=203970
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ် ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက် မှာ ကျနော် တဖန် ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
The post အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းအား တမ်းတချက် appeared first on ဧရာဝတီ.
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ် ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ မှာ ကျနော် တဖန် ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့မနက်က ကျနော်တို့တတွေဟာ မနက်စာအတွက် ပြင်ကြဆင်ကြ၊ အခန်းအပြင်ဖက်မှာ ဂန်ဖလားတွေ (အပေါ့အလေးသွားရန် သုံးသည့် မြေအင်တုံ) ဆေးကြကြောကြနဲ့ အလုပ်များနေတုန်း ကျနော်တို့ တိုက် ၁ နဲ့ တိုက်၂ ဝင်း အဝကနေ ကျနော့်နာမည်ကို အော်ခေါ်သံ ကြားလိုက်တယ်။
ကျနော်တို့ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ ဗြိတိသျှကိုလိုနီတွေကို လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်ခဲ့တဲ့အတွက် နောက်လိုက်နောက်ပါ အများအပြားနဲ့ အတူ ၁၉၃၁ ခုနှစ်မှာ တောင်သူလယ်သမား အရေးတော်ပုံခေါင်းဆောင် ဆရာစံ ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခံခဲ့ရလို့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ထင်ရှားတဲ့ သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်ထဲမှာပါ။
“ကျော်စွာမိုး…ဝင်းနိုင်…ဟန်မြင့်” လို့ ဝါဒါတယောက်က အော်ခေါ်လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ အကျဉ်းကျဖော် ကျဖက်တွေကလည်း ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ဝါဒါ အော်တဲ့ အတိုင်း လိုက်အော်ကြပါတယ်။ သေချာတာဆိုလို့ ဘာတခုမှမရှိတဲ့ ထောင်ထဲမှာ အခုလိုမျိုး ကိုယ့်နာမည်ကို ထောင်ဝါဒါက အော်ခေါ်တာဟာ တခြားအဆောင် ဒါမှမဟုတ် တခြားထောင်ကို ပြောင်းဖို့ အခေါ်ခံရတာ ဖြစ်နိုင်သလို လွတ်ရက်စေ့ကာနီး သူအဖို့တော့ အခုလို နာမည်ခေါ်ခံရတာက အတိတ်နိမိတ်ကောင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့ဒီနေ့က ကျနော်တို့ သုံးယောက်လုံး ထောင်က လွတ်ခဲ့ပါတယ်။
ထောင်ထဲမှာ ၁၉ နှစ်ကျော်နေခဲ့ရတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ရောင်းရင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်က “ထောင်ဆိုတာ သင်္ချိုင်းဆိုရင် အကျဉ်းခန်းက အုတ်ဂူပေါ့” လို့ ဆိုဖူးတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ရက်နေ့ မှာတော့ ကျနော်ဟာ သာယာဝတီထောင် ဆိုတဲ့ သင်္ချိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ အကျဉ်းခန်းနံပါတ် ၇ ဆိုတဲ့ ကျနော့်ရဲ့အုတ်ဂူထဲက ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့ဟာ ကျနော် ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့တဲ့နေ့ပါပဲ။
အဲ့နေ့မတိုင်ခင် ရှစ်နှစ်တာလုံး ကျနော်ဟာ “သေခြင်းတရား”ဆိုတာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး အင်းစိန်ထောင် နဲ့ သာယာဝတီထောင် အတွင်းမှာ မြှုပ်နှံခံခဲ့ရပါတယ်။
ကျနော် တကယ် သေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်မှန်းတော့ သိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် လူတယောက်အဖို့ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ သင်ယူတာ အားလုံးနဲ့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဘဝက ဘာများ အဓိပ္ပါယ်ရှိအုံးမှာတုန်း။ လွတ်လပ်တဲ့သူတွေ ခံစား စံစားရာ အရာအားလုံးကင်းမဲ့နေတဲ့ လူတယောက်ကို အသက်ရှင်သန်နေတယ်လို့ ဘယ်လိုများ ယူဆနိုင်ဦးမှာလဲ။ ဒါကြောင့် ကျနော်ဟာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးနောက် ဆိုခဲ့ပါအရာတွေကို ကျနော့်ဆီကနေ ယူဆောင်သွားမယ့် အကျဉ်းထောင်ထဲကို ပစ်သွင်းခံလိုက်ရတဲ့နေ့မှာ ကျနော် “သေဆုံး” ခဲ့တယ်လို့ပြောရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်ကို ဖမ်းဆီးပြီး အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ မြှပ်နှံခဲ့တာကတော့ န.ဝ.တ လို့ အများခေါ်ကြတဲ့ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ပါပဲ။ န.ဝ.တ ကို ဖယ်ရှားပြီး ပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ အစိုးရတရပ် ပြန်ရရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ တခြားသူတွေလည်း အလားတူ ဖမ်းဆီးမြှပ်နှံခံခဲ့ကြရပါတယ်။ န.ဝ.တ ဟာ ၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကို အင်အားသုံးဖြိုခွင်းပြီး အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ စစ်ကောင်စီပါ။
န.ဝ.တ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ရှင်းပါတယ်။ ကျနော်တု့ိရဲ့ စိတ်ဝိဉာဉ်၊ ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒ၊ ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သတ္တိ၊ အသိဉာဏ်ပညာ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေနဲ့ တခြား အလားတူအရာတွေ အားလုံးကို လုံး၀ မရှိတာ့အောင် ရှင်းလင်းဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ပါပဲ။ ဒီတန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေကို ကျနော့်ကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ “လက်နက်”တွေလို့ မြင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဲ့ဒီလက်နက်တွေနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးကို ကျနော်တို့ ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့က ဒီလို လက်နက်တွေ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ကျနော်တို့တွေကို သေဆုံးသွားအောင် လုပ်ဖို့ လိုအပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ထောင်ထဲမှာ မြှပ်နှံခံခဲ့ရတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ မနက် သာယာဝတီထောင်က ကျနော် ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကျနော်ကိုယ်ကျနော် “လက်နက်တွေ” မရှိတော့တဲ့ စစ်သည်တယောက်လို မခံစားခဲ့ရပါဘူး။ အရင်ထက်တောင် ပိုခိုင်မာလာတယ်လို့ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အသတ်ခံရမှုကနေ လွတ်မြောက်လာခဲ့ရုံမက “အုတ်ဂူ” တွင်း အမြှပ်ခံခဲ့ရတဲ့ ရှစ်နှစ်တာအတွင်းမှာ ပိုအားကောင်းတဲ့ လက်နက်တွေတောင် ရလာသေးတယ်။
ဒီ “လက်နက်” တွေဟာ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူအတွက် အခြေခံတရားတွေပါ။ လက်နက်လို့ ကျနော်သတ်မှတ်တဲ့ အဲ့ဒီ ဂုဏ်သတ္တိတွေက ကျနော်တို့ရဲ့ သွေးကြောတွေထဲမှာ စီးဆင်းနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ဟာ တောင်အာဖရိက အသားအရောင်ခွဲခြားမှု ဆန့်ကျင်ရေးခေါင်းဆောင် နယ်(လ)ဆင်မင်ဒဲလား၊ ချက်ကိုစလိုဗက် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဗားကလက်ဟာဗဲ(လ)၊ အမေရိကန် ပြည်သူ့အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင် မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာတို့လို ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆီက ကြံြ့ကံခံနိုင်တဲ့ ခွန်အားကိုလည်း အားကျ၊ နမူနာ ယူခဲ့ကြပါတယ်။
အကျဉ်းစံကာလ ၂၇ နှစ်တာ အတွင်းမှာ မန်ဒဲလားလုပ်ခဲ့သလို ကျနော်တို့ဟာလည်း ထောင်ထဲမှာ စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ ရှေ့ဆောင်းပါးတခုမှာရေးခဲ့သလို အခက်အခဲတွေကြားထဲမှာ ရှင်သန်ရေးနည်းလမ်းတွေထဲက တခုအဖြစ် ကျနော်တို့က ကျနော်တို့ကို မြှပ်နှံထားတဲ့ အကျဉ်းခန်း အုတ်ဂူတွေကို စာသင်ခန်းတွေအဖြစ်၊ စာကြည့်တိုက်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး အာဏာပိုင်တွေ ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့် လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်နဲ့ အသိဉာဏ်ပညာတွေ တိုးအောင် လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ထောင်ကလွတ်တော့ ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီတခုရရှိပြိး တက္ကသိုလ်ကနေ ထွက်လာသလိုမျိုး ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ထောင်ထဲ ရှစ်နှစ်နေတာ ဘယ်လိုတုန်းလို့ မေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တခြားသူတွေကို ကျနော် အဲ့လိုအမြဲ နောက်ပြီး ဖြေလေ့ရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲ့ဒီစကားက ထောင်ကျနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာ ကျနော်ရခဲ့တဲ့ အင်မတန် ရှားပါးတဲ့အခွင့်အရေးကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ထိထိမိမိတောင် မထင်ဟပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုအခွင့်အရေးက ကမ္ဘာပေါ်က လူတွေအများကြီးထဲက လူနည်းစုလေးပဲရတဲ့ အခွင့်အရေးတခုပါ။
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ၊ လူမဆန်မှုတွေနဲ့အတူ ထောင်တွင်းအကျဉ်းကျဘဝဆိုတာ အာဏာရှင်စနစ်ကို တွန်းလှန်တဲ့ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားတဦးရဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေထက် အများကြီး ပိုပါတယ်။ သာမန်နေ့စဉ်ဘဝမှာ မရှိတဲ့ ဒီအခက်အခဲတွေကို ကျနော် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့ ကြိုးစားရတဲ့အခါတိုင်း စာမေးပွဲတခုကို ဖြေဆိုနေရသလို ကျနော်ခံစားရပါတယ်။
စာမေးပွဲ အောင်ရုံလေးသာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆက်လက်ရှင်သန်နေဖို့၊ အမေက ကျနော့်ကိုပေးခဲ့တဲ့ လူ့ဘဝကို မဆုံးရှုံးဖို့ပါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကျဉ်းခန်းထဲမှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ စာမေးပွဲတွေကို အောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ IQ နဲ့ EQ နှစ်ခုစလုံးမှာပါ တိုးတက်စေနိုင်တာ အမှန်ပါပဲ။
ကျနော်ထောင်က ထွက်လာတဲ့ အဲဒီမနက်မှာ ထောင်ဂဏန်းရှိတဲ့ တခြား ကျနော့်ရောင်းရင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ထောင်နံရံတွေနောက်မှာ ဆက်ရှိနေကြသေးတဲ့အတွက် ကျနော်အနေနဲ့ အားရပါးရ မပျော်ရွှင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ပြင် ကျနော်တို့နိုင်ငံက နိုင်ငံရေးအရလည်း လွတ်လပ်မှု မရှိသေး။ ကျနော်တို့ ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ န.ဝ.တကနေ အမည်ပြောင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (န.အ.ဖ) အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ ဆက်ရှိနေပါတယ်။
ပြောရရင် ကျနော်ဟာ အောင်ပွဲရခဲ့ပြီလို့ ခံစားပြီး ထောင်က ထွက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုံး၀ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုက်ပွဲရှုံးခဲ့ပြီလို့လည်း မခံစားခဲ့ရပါဘူး။ ရှည်ကြာ ပြင်းထန်တဲ့ အထူး လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်း တခုကို တက်ရောက်ပြီးမြောက်ခဲ့တာပဲလို့ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကို ဆက်လက်ဆင်နွှဲဖို့သာမက မရေရာ မသေချာမှုတွေနဲ့ ပြည့်နေပြီး မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတတ်တဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးကို ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ရောပေါ့။
ကျနော်တို့အဖမ်းမခံရခင်က စခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကို ဆက်လက်ဆင်နွှဲဖို့၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံကို အာဏာရှင် လက်အောက် ဒါမှမဟုတ် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်က လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းဖို့ ကျနော်ဟာ အသစ် တဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားလာတယ်လို့ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။
ကျနော်ပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့တာ နှစ်နှစ်ဆယ်ပြည့်တဲ့ ဒီအပတ်ထဲမှာ ကျနော်နဲ့အတူ လွတ်လာခဲ့တဲ့ ကိုဟန်မြင့်အပါအဝင် ထောင်ထဲမှာ အတူနေခဲ့ရတဲ့ သူတချို့နဲ့ တွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုဟန်မြင့်ဟာ သူ အဖမ်းမခံရခင်ကတည်းက သူ နေထိုင်အသက်မွေးခဲ့ရာ ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဆိုးတန်းမှာ အနှစ် ၃၀ ကျော်လုပ်လာခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဟောင်းရောင်းသူ ဘဝနဲ့ပဲ ဆက်လက် အသက်မွေးနေပါတယ်။ သူက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတယောက်ရယ်လို့ မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တတ်တဲ့ အစိုးရတွေကို နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ အမြဲ ဆန့်ကျင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းဆိုးတန်းပလက်ဖောင်းပေါ်က သူ့စာအုပ်ဆိုင်လေးမှာ ထိုင်ရင်းနဲ့ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ သတင်းစကား အပြန်အလှန်ပါးရာမှာ ကူညီခဲ့မှုအတွက် အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ချခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်းစိန်နဲ့ သာယာဝတီနှစ်ထောင်မှာ သူ ထောင်ကျခံခဲ့ရတဲ့ကာလတလျှောက် ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ပုံ မပြခဲ့ပါဘူး။ ဒီအပတ်ထဲ သူနဲ့ ကျနော် ဆုံဖြစ်တော့ အေးအေးလူလူနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး စာအုပ်ရောင်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူလည်း ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့တာပါပဲ။ သူ့စိတ်ဓာတ်ကို ထောင်ထဲမှာ ပြိုကွဲမခံခဲ့ပါဘူး။
ဒီအပတ်ထဲမှာ ကျနော် သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ တခြားနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကတော့ ကိုစိုးမြင့်ပါ။ သူနဲ့ ကျနော် သာယာဝတီထောင်မှာ ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ သုံးကြိမ်သုံးခါပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့တဲ့သူပါ။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ ပထမအကြိမ် သူ အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး ၁၉၈၀ ခုနှစ်အထိ နှစ်နှစ်ကြာထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ ထပ်အဖမ်းခံရပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ အကျဉ်းချခံခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ သုံးကြိမ်မြောက်သူအဖမ်းခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ်အနေနဲ့နှစ် ၂၀ အတိ အကျ ကျခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အစွပ်စွဲခံရတဲ့ပြစ်မှုအားလုံးဟာ ဦးနေဝင်းရဲ့အာဏာရှင်အစိုးရနဲ့ သူ့ကိုဆက်ခံတဲ့ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ခဲ့မှုတွေကြောင့် ပါပဲ။
ကိုစိုးမြင့်ဟာ ထောင်ထဲမှာ စုစုပေါင်း ၂၉ နှစ်ကြာနေခဲ့ရပါတယ်။ မင်ဒဲလားထက်တောင် ပိုကြာသေးတယ်။ အခုတော့ သူ့မိသားစုနဲ့အတူ နေနေပြီး မဂ္ဂဇင်း၊ စာစောင်တချို့အတွက် ကိုယ်တိုင်လည်း စာရေးပြီး ဘာသာပြန်တွေလည်း ရေးပေးနေတယ်။ သူက နိုင်ငံရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်စပ်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ရေးတယ်။ ဒီလူတွေဟာ “အတွင်းကြေ အတွင်းသေ” ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရ ဘုန်းဘုန်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ဒူပေဒါပေခံနိုင်စွမ်းက အံမခန်းပါဘဲ။
မြန်မာ့အရေး နိုင်ငံရပ်ခြားက လေ့လာသူတွေနဲ့ ပြည်တွင်းကလူတွေက မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့ အစည်းတခုလုံးက အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ဖိနှိပ်အုပ်စိုးမှုနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ငါးခုကျော် တိုင်းပြည်ရဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့် စိတ်ဝေဒနာရနေတယ် ဆိုပြီး ပြောလေ့ရှိတယ်။
ဒါကို ကျနော်လုံးဝသဘောမတူပါဘူး။ သေချာတာက လူဦးရေ ၅၃ သန်းထဲက တချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ တခြားနိုင်ငံက လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ရှိကြသလိုပဲ စိတ်အမာရွတ်တွေ ထင်ကျန်နေခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလူတွေထဲမှာ မတရား နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခံခဲ့ရတဲ့သူတွေ၊ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ၊့ ခြိမ်းခြောက်ခံခဲ့ရတဲ့ ဒါမှမဟုတ် နေရပ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရသူတွေ ပါဝင်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် “မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံး စိတ်ဝေဒနာရခဲ့ကြတယ်” လို့ ပြောတာကတော့ မမှန်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ဒီလိုပြောသူတွေဟာ မြန်မာပြည်သူတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာမျိုး သူတို့ကြုံတွေ့ရရင် သူတို့ဘယ်လို ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကို စိတ်ကူးပုံဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်မှာ ကျနော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အကျဉ်းကျဖော်ဟောင်းတွေက ပြသခဲ့ကြတဲ့ ကြံကြံခံ အန်တုနိုင်စွမ်းနဲ့ ပြန်နလန်ထူနိုင်စွမ်းတွေက “စိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်း” တခုဆိုတဲ့ အယူအဆမှားယွင်းကြောင်း သက်သေပြနေပါတယ်။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ တကယ် စိတ်ဒဏ်ရာရကြစတမ်းဆိုရင် ဗြိတိသျှတို့က နှစ် ၁၀၀ ကိုလိုနီပြုအုပ်ချုပ်ကတည်းက ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဂျပန်ခေတ်မှာ ရခဲ့မှာဖြစ်ပြီး တခါ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီး ဗြိတိသျှတို့ပြန်အဝင်မှာ နောက်တကြိမ် ထပ်မံခံစားခဲ့ကြရမှာပါ။
မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အတော် ကြံကြံခံအန်တုနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ တကြိမ်တခါမက အသတ်ခံခဲ့ရကြပေမယ့် ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျနော်ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့ပြီး နှစ် ၂၀ အကြာမှာ ယုံကြည်ချက်အတွက် ကျနော် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေသလို ကျနော့်ဝန်းကျင်မှာလည်း ကျနော်နဲ့ တလှေတည်းစီးပြီး သူတို့ယုံကြည်မှုတွေအတွက် ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြတဲ့ မရေတွက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ သေခြင်းတရားကို နောက်တကြိမ် ရင်ဆိုင်ကောင်း ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကြုံလာရင်လည်း နောက်တကြိမ် ပြန်လည်မွေးဖွားလာဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
(Kyaw Zwa Moe ၏ Recalling the Day When I Was Reborn ကို လူသာလင်း မြန်မာပြန်ဆိုသည်။)
]]> သမ္မတနေရာပြန်ယူဖို့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ အစီအစဉ် ရှိလား https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2019/09/02/202668.html Mon, 02 Sep 2019 00:30:08 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=202668
လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သမ္မတ နေရာကို ပြန်လည်ရယူရေး စစ်ဗိုလ်ချုပ် ဟောင်းများနှင့် USDP အပါအဝင် သူတို့၏ မဟာမိတ်ပါတီများ နှင့် တပ်မတော် တွင် ဒုတိယ အစီအစဉ်တခု ရှိ/မရှိ
The post သမ္မတနေရာပြန်ယူဖို့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ အစီအစဉ် ရှိလား appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> နိုင်ငံရေးတွင် စစ်ဘက်ပါဝင်မှု အဆုံးသတ်ရန် နှစ် ၃၀ ကြာနိုင်သည် https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2019/06/10/194220.html Mon, 10 Jun 2019 01:30:15 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=194220
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုသည် နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း ၃၀ခန့် ကြာဦးမည်ဟု ကျနော်ပြောလျှင် ယုံဖို့ ခက်ပါလိမ့်မည်။
The post နိုင်ငံရေးတွင် စစ်ဘက်ပါဝင်မှု အဆုံးသတ်ရန် နှစ် ၃၀ ကြာနိုင်သည် appeared first on ဧရာဝတီ.
တပ်မတော် အနေဖြင့် လာမည့် ဆယ်နှစ် အတွင်းတွင် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ ထွက်ခွာသွားမည့် အရိပ်အယောင် မရှိပေ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စတင်ခဲ့သော်လည်း တပ်မတော် အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် မည်သည့် အချိန်တွင် နိုင်ငံရေး မှ ထွက်ခွာမည်ကို တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများ မှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိသေးပေ။
တပ်မတော် အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ သူတို့ ဘယ်တော့ ထွက်ခွာမည်ကို ထုတ်ပြောထားခြင်းကား ရှိသည်။ သို့သော် မည်သည့်အချိန်ဆိုသည်ကို မည်သူမှ အတိအကျ မသိပေ။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ မရှိတော့ဘဲ တိုင်းပြည်အေးချမ်းသွားသည့်အချိန်တွင် တပ်မတော်က နိုင်ငံရေးမှစွန့်ခွာမည်ဟု တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောထားသည်။ သို့သော် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဗြိတိသျှတို့ထံမှ လွတ်လပ်ရေးရချိန်မှ စတင်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေသောနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဘယ်တော့ရမည်လဲဆိုသည်မှာ ကြိုတင် ခန့်မှန်း မရနိုင်သော ကိစ္စ ဖြစ်နေသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြည့်လျှင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး တောင်းခံနေသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း ၂၀ နီးပါးနှင့် တပ်မတော်အကြား ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများအား လုံး၀ အဆုံးသတ်နိုင်လောက်သည့် အခြေအနေမျိုး မရရှိသေးပေ။
ထို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအနက် ၁၀ ဖွဲ့သည် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြသော်လည်း အနည်းဆုံး အခြား ၅ ဖွဲ့သည် ၎င်းတို့ခြေကုပ်ရယူထားသော ဒေသများတွင် တပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။
ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် ဘယ်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်မည်ဆိုသည်မှာ တွေးဆ၍ မရနိုင်သည့်အရာသာ ဖြစ်သည်။ နောင်လာမည့် နှစ် ၂၀ သို့မဟုတ် ၃၀ အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးရမည်ဟု မည်သူမျှ အာမခံနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ထိုကြောင့် တပ်မတော်သည် နိုင်ငံရေးမှ မည်သည့်အချိန် အမှန်တကယ် ထွက်ခွာသွားမည်ဆိုသည်မှာ မသိနိုင်သေးသော အရာဖြစ်သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး စစ်ဘက်၏ အုပ်ချုပ်ရေးအောက်တွင်ရှိခဲ့သော နိုင်ငံတခုကို အရပ်ဖက် အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းသည် မတိုင်းတာနိုင်လောက်အောင် ကြီးမားသည့် တာဝန်တခုဟု ဆိုရမည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဦးဆောင်သော လက်ရှိအစိုးရက ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် အာဏာရလာချိန်မှ စတင်ပြီး ထိုကိစ္စကို ဆောင်ရွက်နေရသည်။
ယခုနှစ် မတ်လတွင် NLD သည် ဖွဲ့စည်းပုံအရ တပ်မတော်က ယူထားသည့် လွှတ်တော်နေရာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေး လေ့လာသုံးသပ်နေသည့် လွှတ်တော်ပူးတွဲကော်မတီ၏ တံခါးပိတ် အစည်းအဝေးများတွင် အဆိုပြုချက် ရှိခဲ့သည်။
ထိုအဆိုပြုချက်အရ လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်အတွင်းမှ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပြီး နောက်လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် နောက်ထပ် ၅ ရာခိုင်နှုန်းစီ လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအဆိုပြုချက် အကောင်အထည်ပေါ်ပါက ၂၀၃၅ ခုနှစ်တွင် လွှတ်တော်အတွင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်သည့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ ရှိတော့မည် မဟုတ်ပေ။ ထိုအတိုင်းဖြစ်မည်ဆိုလျှင်ပင် နောက်ထပ် ၁၆ နှစ်လိုသေးသည်။
တပ်မတော်ကို စစ်တန်းလျားသို့ ချက်ခြင်းပြန်ရန်ပြောဆိုခြင်းမှာ မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် NLD သည် လက်တွေ့ကျသော ထိုနည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း မတ်လတွင် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးက ဧရာဝတီ သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။ လွှတ်တော်တွင်း တပ်မတော်သားများကို ချက်ချင်းဖယ်ထုတ်ရန်မှာ လက်တွေ့မကျမှန်း ကျနော်တို့လည်း သိကြပါသည်။
NLD က ဦးဆောင်ပြီး လွှတ်တော်မှ တိုင်းရင်းသားပါတီအများစု ထောက်ခံသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များက ကန့်ကွက်ခဲ့သည်ကို အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးတွင် တပ်မတော် ပါဝင်နေမှုကို အာမခံသည့် ပုဒ်မအများစုကို တပ်မတော်ကပြင်ဆင်လိုခြင်း မရှိသည်မှာ ရှင်းလင်းလှသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးကို မဆန့်ကျင်ကြောင်း တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များက တရားဝင်ပြောကြားစေကာမူ ၎င်းတို့သည် ဖွဲ့စည်းပုံပါ ပုဒ်မ အများစုပြင်ဆင်မည်ကို မလိုလားကြပေ။
တပ်မတော်ဘက်မှ ထိုသို့ကန့်ကွက်မှုများ မရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် ယနေ့ အားလုံးမျှော်မှန်းထားသည်ထက် လွန်စွာ ပိုမို လျင်မြန်လာနိုင်ဖွယ် ရှိနိုင်သည်။
သို့သော် လက်တွေ့ပကတိအခြေအနေ တွင်မူ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းသည် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်မှုကို တဖြည်းဖြည်းချင်း လျော့ချသွားမည့် NLD ၏ အဆိုပြုချက်ကိုပင် လက်ခံဖို့ ခက်ခဲနေပုံ ရသည်။ နောက်ထပ် ၁၆ နှစ်ကြာမည့် ထိုအဆိုပြုချက်သည် ၎င်းတို့အတွက် စောလွန်းနေပုံ ရသည်။ လွှတ်တော်တွင်းမှ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များက ထိုအဆိုပြုချက်ကို သဘောမတူကြလျှင် နောက်ဆုံးတွင် ထိုအဆိုပြုချက်သည် NLD ၏ သူတို့ဖြစ်ချင်သည်ကို ပုံဖော်ထားသည့် စိတ်ကူးယဉ်မှုတခုသာ ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အဆိုပါပုဒ်မသည် လွှတ်တော်အတွင်းရှိ ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တနည်းအားဖြင့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များပါ ပြင်ဆင်ရန်သဘောတူမှသာ ပြင်နိုင်မည်။
ထိုအဆိုပြုချက် အတည်ပြုနိုင်ရေးသည် တပ်မတော်၏ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပေါ် လုံးဝ မူတည်နေသည်။ ထိုအတွက် NLD အနေဖြင့် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ရန် လိုသည်။
တပ်မတော်နှင့် အစိုးရတို့သည် ‘မချစ်သောလည်း အောင့်ကာနမ်း’ ဟူသည့် မြန်မာဆိုရိုးစကားအတိုင်း ပြုမူကြရမည်ဟု ကျနော်ထင်မိသည်။ ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရည်စူးပြီး ၎င်းတို့သည် တဖက်နှင့် တဖက် မနှစ်သက်နိုင်သော်ငြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်သည်။
သို့သော် ယခု အချိန်အထိ NLD အစိုးရသည် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် အရှိန်မြှင့်ရန် ၎င်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များကို စည်းရုံးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
တပ်မတော် သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိ မည်သည့် အချိန်တွင် ပြင်ခွင့်ပေးပြီး မည်သည့်အချိန်တွင် နိုင်ငံရေးမှ ထွက်ခွာသွားမည်ကို မည်သူမျှ မသိပေ။ တပ်မတော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ၏ စိတ်နေသဘောထား၊ နိုင်ငံအရေးအတွေးအခေါ်အယူအဆနှင့် နှစ် ၆၀ အတွင်း ကိုင်တွယ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပုံများအပေါ် မူတည်ပြီး ကျနော် ပုဂ္ဂလိကအမြင်အရဆိုလျှင် ၎င်းတို့ နိုင်ငံရေးမှ ထွက်ခွာသွားရန် ဆယ်စုနှစ် ၂ ခု သို့မဟုတ် ၃ အခုအထိ ကြာလိမ့်မည်ဟု မှန်းဆသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည့် ထိပ်တန်းသံတမန်တဦးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေနင့် အထွေထွေအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးရန် ကျနော် ဖိတ်ခံရသည်။
“၁၉၈၈ မှာစတင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ နှစ် ၃၀ ကြာတဲ့အခါ ကျနော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ က ရည်မှန်းခဲ့တာတွေ အောင်မြင်ဖို့ နောက်ထပ် နှစ် ၃၀ ကြာဦးမယ်ဆိုတာ ကျနော်တွေ့လိုက်ရတယ်” ဟု ထိုပွဲတွင် ကျနော်ပြောပြဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံ၏ ယနေ့လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ရည်မှန်းခဲ့သည့် အာဏာရှင်အစိုးရဖြုတ်ချပြီး ဒီမိုကရေစီအစိုးရပေါ်ပေါက်ရေးသည် လမ်းတဝက်သာရောက်သေးကြောင်း ကျနော်က ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ယခုနှစ် ၃၀ အကြာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ခံအရပ်သားအစိုးရတရပ် ရှိလာသည်။ သို့သော် ထို အရပ်သားအစိုးရသည် အခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်တွင်း ဥပဒေပြုရေးတွင်သာမက အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုပါ တပ်မတော်နှင့် ခွဲဝေယူထားရသည်။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာ လွတ်လပ်မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများမှ အရပ်သားစစ်စစ် အစိုးရတရပ် ပေါ်ပေါက်လာရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခု NLD နှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများ ဆောင်ရွက်နေကြသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် တပ်မတော်မှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်နေမှုကို တွေ့မြင်ရသောကြောင့် ပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ အရပ်သားအစိုးရတရပ် ပေါ်ပေါက်ရေးမှာ နောက် နှစ် ၃၀ ခန့်ကြာဦးမည်ဟု ကျနော်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အရှင်းဆုံးပြောရလျှင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းမဟုတ်ဘဲတပ်မတော်က လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့တွင်ယခုကဲ့သို့ အာဏာ ခွဲေ၀ ယူထားသရွေ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟု ခေါ်ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
အာဏာရှင်စစ်အစိုးရလက်အောက် နှစ် ၆၀ ကျော် အုပ်ချုပ်ခံခဲ့ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးစစ်စစ်ကို ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင်တော့ တွေ့မြင်နိုင်မည်ဟု ကျနော်မျှော်လင့်မိပါသည်။ ထိုမှသာ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် စစ်မှန်သောပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ၂၀၅၀ မတိုင်ကာလအတွင်း လက်ရှိသွားနေသည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို တပ်မတော်မှ နောက်တကြိမ် ဝင်ရောက်ဟန့်တားစေရန် ပံ့ပိုးပေးသော နိုင်ငံရေးအခြေအနေမျိုး မပေါ်ပေါက်လာစေရန်သာ ဆုတောင်းရတော့မည်ဖြစ်သည်။
(ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်းပါ Kyaw Zwa Moe ၏ Civilianizing This Militarized Nation Could Take Another Three Decades ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
တပ်မတော်နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပေါင်း၍ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မတချို့ ထပ်မံ ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးပမ်း x
]]> သတင်းကောင်းဖြစ်လည်း ကျနော်တို့ လိုအပ်တဲ့ သတင်းမဟုတ်သေး https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2019/05/27/192586.html Mon, 27 May 2019 05:26:08 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=192586
ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့ အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာမှုသည် သတင်းကောင်းဖြစ်သော်လည်း မီဒီယာလောက အပြောင်းအလဲ ရှိလာမည့် သတင်းတော့ မဟုတ်သေးချေ။
The post သတင်းကောင်းဖြစ်လည်း ကျနော်တို့ လိုအပ်တဲ့ သတင်းမဟုတ်သေး appeared first on ဧရာဝတီ.